မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အမည်မသိ ဝေဒနာ
နှစ်သက်ဖွယ် ကြင်နာတတ်တဲ့ ကောင်လေးရေငါ့ကိုတော့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်သူငယ်ချင်းတွေ ပြောသမျှလဲ ၀န်မခံ ခေါင်းမညိတ်၊ငြင်းဆန်ခြင်းလဲမပြုပါလား။ငါ့စိတ်ကိုလည်း နှစ်သက်ယိုဖိတ်လာအောင် မပြုလုပ်ခဲ့ပါပဲငါကတော့ နင်နဲ့ ပါတ်သက်မှုမှာ နှစ်သက် ပျော်ဝင်နေမိပါရဲ့။ငါသေသည့်တိုင် နင့်ကို နှစ်သက်ချစ်ခင် မြတ်နိုးနေမိမှာပါ။
မမရဲ့ အမည်မသိဝေဒနာကို အမည်ဖော်ပေးရမလားဟင်... သိုးက ဗေဒင်ဟောတတ်တယ်။
မောင်ရေ.. အမည်မသိဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ လာအားပေးတာပါး)
ကောင်လေးကလည်း သေသည့်တိုင်အောင် နှစ်သက်မြတ်နိုးနေမှာပေါ့ :)
Sai >> စက်ရုပ်မှ မဟုတ်တာ မြတ်နိုးတတ်တာပေါ့ကွာ Anybody can beapoet because of love.သိုးမလေး >> လုပ်ပါဦးကွာ အမည်လဲဖေါ်ပေးရင်း ဗေဒင်လဲဟောရင်းပေါ့ဂျစ် >> အားချိတွားပီ တိရားကိုဖြိုး >> ဆုတောင်းပေးတာလားဟင်၊ အဲလိုဆိုရင်တော့ သိုင်းခရု၊ သိုင်းပက်ကျိပါပဲနော် ငှက်ငှက်ငှက် :P
မ…အဲဒါ အချစ်ကင်ဆာ…လို့ ခေါ်တယ်….။ မ…ရေ….အဲဒီဝေဒနာကို မွေးမထားနဲ့ နော်….။
aww my ama melody ======== BROKEN HEART .HELP HER . LET'S ME GUESS ---------WHO MAKE HER BROKEN HEAART . ----